सामाजिक र स्वास्थ्य सेवा के हो | गठन र अध्ययन
सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के हो?
मारिया जोस रोल्डन | | काम बन्द गर्नुहोस्
जनसंख्या उकालो र सीमाहरु द्वारा बुढेसकाल र छ यही कारणले गर्दा सामाजिक स्वास्थ्य सेवा जस्ता पेशा बढ्दै गएको छ। त्यहाँ राम्रो पेशेवरहरुको लागी एक वास्तविक माग हो जो जान्दछन् कि कसरी हेरचाह गर्ने र मानिसहरुलाई मद्दत गर्न को लागी, जो उनीहरुको उमेर को कारणले अब आफ्नो लागी बचाउन सक्षम छैनन्।
यस्तो काम को विकास गर्ने पेशेवरहरुको अस्तित्व कुञ्जी हो जब यो आउँछ यी आश्रित र बुढाबुढीहरुलाई जीवन को एक राम्रो गुणस्तर प्रदान गर्न सक्षम हुन।
1 सामाजिक र स्वास्थ्य सेवा के हो?
2 सामाजिक स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने एक व्यक्ति को कार्यहरु के गर्दछ
3 सामाजिक स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा के रोजगारीको अवसर छ?
4 एक स्वास्थ्य पेशेवर को तलब के हो?
5 कौशल कि एक व्यक्ति जो आफैलाई सामाजिक स्वास्थ्य हेरविचार को लागी समर्पित हुनु पर्छ
सामाजिक र स्वास्थ्य सेवा के हो?
यो हेरचाह एक व्यक्तिले गर्ने हेरचाह भन्दा बढी केहि छैन, विभिन्न आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी जो मानिसहरु जो आफैंको ख्याल राख्दैनन् हुन सक्छ। यो हेरचाह आवश्यक छ किनकि त्यस्ता मानिसहरु निर्भर छन् र उनीहरुको स्वायत्तता गुमाएका छन्। उनीहरु वृद्ध हुन सक्छन् वा अशक्तताको महत्वपूर्ण डिग्री हुन सक्छन्।
सामाजिक स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने एक व्यक्ति को कार्यहरु के गर्दछ
यस्तो काम गर्ने व्यक्ति को मुख्य कार्य, यो आश्रित को जीवन को गुणस्तर मा सुधार र धेरै सजिलो बनाउन को लागी हो। एक विशिष्ट तरीका मा, सामाजिक स्वास्थ्य सहायक निम्न कार्यहरु छन्:
यो आश्रित व्यक्ति लाई पुरा तरिकाले सफा राख्न को लागी जिम्मेवार छ उसलाई खुवाउन वा उसलाई आफैंलाई राहत दिन मद्दत गर्न को लागी।
नर्सि nursing ज्ञान छ कुनै पनि मद्दत को लागी आश्रित व्यक्ति को आवश्यकता हुन सक्छ।
प्रकार को एक समर्थन प्रदर्शन गर्नुहोस् शारीरिक वा मनोसामाजिक।
सार्नुहोस् वा बोक्नुहोस् एक विशिष्ट ठाउँ मा क्लर्क जब आवश्यक छ।
सामाजिक स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा के रोजगारीको अवसर छ?
एक व्यक्ति जो एक सामाजिक स्वास्थ्य सहायक हुन को लागी आफैलाई समर्पित गर्ने निर्णय गर्दछ सामान्यतया दुई रोजगारी को अवसर छ:
एक सामाजिक संस्थाहरु मा काम गरीरहेछ जस्तै बुजुर्गहरु को लागी निवास वा आश्रित अपार्टमेन्टहरु मा निर्भर व्यक्तिहरु लाई व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्ने र केहि प्रकार को अशक्तता छ, या त शारीरिक वा मानसिक।
तपाइँ पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ एक विशेष र विशिष्ट तरीका मा तपाइँको घर सेवाहरु, आफ्नो दैनिक कार्यहरुमा केहि स्वायत्तता गुमाएका मानिसहरु को लागी जीवन सजिलो बनाउन को लागी।
एक स्वास्थ्य पेशेवर को तलब के हो?
जब यो एक सामाजिक स्वास्थ्य सेवा सहायक को तलब जान्न को लागी आउँछ, तपाइँलाई थाहा छ यदि तपाइँको काम सार्वजनिक वा निजी क्षेत्र भित्र पर्दछ। अनुभव को वर्ष पनि तलब मा एक सकारात्मक प्रभाव छ। सामान्य कुरा यो हो कि एक सामाजिक स्वास्थ्य हेरचाह सहायक एक बर्ष को बारे मा 15.000 यूरो कमाउँछ।
कौशल कि एक व्यक्ति जो आफैलाई सामाजिक स्वास्थ्य हेरविचार को लागी समर्पित हुनु पर्छ
सबैजना यो पेशा को अभ्यास गर्न लायक छैन किनकि तपाइँ धेरै कुशल र साथसाथै सहानुभूति हुनु पर्छ जब निर्भर व्यक्तिहरु को लागी हेरचाह। त्यस बाहेक, व्यक्ति योग्यता वा मूल्यहरु कि हाइलाइट गरिनु पर्छ को एक श्रृंखला हुनुपर्छ:
काम मा मनोवृत्ति सकेसम्म सकारात्मक हुनुपर्छ ताकि परिणामहरु को रूप मा वांछित छन्।
एक मूल्य जुन कसैको अभावमा हुन सक्दैन जो यस प्रकारको काम गर्दछ उनीहरुका ग्राहकहरु को लागी सम्मान हो। पेशेवर लाई पनि सम्मान गर्नु पर्छ परम्पराहरु र ब्यवहारहरु को लागी तपाइँ काम गर्नुहुन्छ।
यसबाहेक, यो राम्रो छ कि प्रश्न मा व्यक्ति सामाजिक कौशल को एक संख्या छ जसले कामलाई धेरै प्रभावकारी बनाउँछ:
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ दुबै बिल्कुल ड्राइभ गर्नुहोस् मौखिक र गैर मौखिक भाषा।
आलोचना को सबै प्रकार स्वीकार गर्नुहोस् त्यो काम मा बढ्न।
यो राम्रो छ कि उनी जान्दछन् कि कसरी सुन्नु पर्छ ताकि ग्राहक संग सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो सम्भव छ।
यो काम को एक प्रकार हो कि पनि आवश्यक छ शान्त, धैर्य र शान्ति विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने समयमा।
अवश्य पनि, एक मूल्य जस्तै सहानुभूति हराउन सक्दैन। सामाजिक स्वास्थ्य हेरविचार को आवश्यकता छ कि पेशेवर आफैलाई आफ्नो ग्राहक को छाला मा समस्या बिना राख्न र एक छिटो र कुशल तरीका मा बिभिन्न समस्याहरु लाई हल गर्न सक्षम हुन सक्छ।
संक्षेप मा, यदि तपाइँ अरुलाई मद्दत गर्न चाहानुहुन्छ, विशेष गरी यदि उनीहरु निर्भरता समस्याहरु छन्, स्वास्थ्य सेवा निस्सन्देह तपाइँको काम हो। यस बाहेक, जस्तै कि हामीले पहिले नै माथि उल्लेख गरिसकेका छौं, यो एक पेशा हो कि समाज मा पाईने आश्रित मानिसहरु को संख्या को कारण उच्च माग मा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के हो?
प्रक्रियागत व्यवस्थापन के हो?